बलिउड स्टन्टमा नेपाली साहस
विनीता मरहट्टा बिहीबार, असोज २६, २०७४ 13376 पटक पढिएको
काठमाडौं: तपाईंले अमिताभ बच्चन अभिनीत हिन्दी फिल्म ‘मिस्टर नटवरलाल' हेर्नुभएको छ ? हेर्नुभएको भए त्यसमा अमिताभले बाघसँग कुस्ती खेलेको दृश्य देख्नुभएकै होला। बाघसँग कुस्ती खेल्ने ती अमिताभ नभई नेपाली युवा जगतमान हुन् भन्दा सायद छक्क पर्नुहुनेछ । तर, यसैगरी बलिउड फिल्ममा उनले जोखिमपूर्ण स्टन्ट गर्न थालेको चालीस वर्ष पुगिसकेको छ। जोखिमसँग खेल्दाखेल्दै उनले बलिउडमा आफ्नो नाम स्थापित गरिसकेका छन्- जितेन्द्र सिंह ‘जितु'।
बलिउडका एक्सन अभिनेता अक्षय कुुमारले त उनलाई ‘माउन्टेन मंकी' भनेर बोलाउँछन् । जतिसुकै खतरनाक स्टन्ट पनि स्वीकार गर्ने भएकाले जितुलाई अक्षयले यस्तो उपमा दिएका हुन्।
५६ वर्षे जितु उमेरले ओठमाथि जुँगाका रेखी बनाइदिँदै गर्दा बलिउड छिरेका थिए । कुनै योजना र लक्ष्यले होइन, लहैलहैमा । पशुपति क्षेत्रमा लंगुरबुर्जा खेलिरहेका जितुलाई भारतबाट आएकी छिमेकी दिदी नृत्यांगना तारा थापाले सोधिन्, ‘मुम्बई जाने हो ? ' हुन्न भन्ने ठाउँ नै थिएन । फुरुक्क पर्दै तारा दिदीको पछि लागेका थिए उनी आजभन्दा चालीस वर्षपहिले।
त्यहीँबाट सुरु भएको हो जितुको जोखिमसँग खेल्ने जीवनकथा । जीवनले अवसरका ढोका खोल्न कन्जुसी गरेको थियो । बलिउडमा जस्तो भए पनि काम गर्ने मुडमा थिए उनी । केही नभए ‘स्पट ब्वाय'मा भए पनि चित्त बुझाउनुपर्ने थियो । सम्भावनाका ढोका चहार्दै गर्दा एक दिन स्टन्ट अभ्यास गरिरहेका युवाहरूलाई देखे उनले । उनीहरूसँग आफूले पनि अभ्यास गर्ने इच्छा व्यक्त गरे । तर, उमेरले छिर्के हानिदियो । स्टन्ट गर्न २१ वर्ष पुग्नुपथ्र्यो, उनी १६ वर्षका मात्र थिए । इच्छालाई नियमको बन्देजले रोक्ने कुरै भएन। औपचारिक रूपमा स्टन्ट एसिस्टेन्टको कार्ड नबने पनि उनलाई अभ्यास गर्न दिइयो।
अभ्यासकै क्रममा एक दिन बलिउडका स्टन्ट, एक्सन कोरियोग्राफर तथा बलिउड निर्देशक विरु देवगनले देखेछन् । जितुको कलाबाट प्रभावित भएर विरुले आफ्नो कार्ड दिई घर नजिकैको बगैंचामा बोलाए। त्यहाँ पुगेपछि थाहा पाए, अभिनेत्री रेखाको डुप्लिकेट गर्नुपर्ने रहेछ। पहिलोपटक डुप्लिकेटबारे सुन्दा अचम्मै परेको सुनाउँछन् उनी।
बलिउड ‘नटवरलाल'का लागि रेखाको डुप्लिकेट गर्न श्रीनगर जानुपर्ने भयो । जाडोको कपडा लिएर आउनू भनेका थिए, उनीसँग दुई जोर टिसर्ट प्यान्टभन्दा अरू लुगा थिएनन् । न्यानो लुगा पनि बलिउडको टिमका मान्छेले व्यवस्था गरिदिए । सुटिङका लागि पहिल्यै घोडा चढ्ने अभ्यास गरेका थिए । यो मौकाले जीवनका धेरै पहिलो अनुभव दिलायो । बलिउडमा काम गर्न पहिलोपटक हवाईजहाज चढेर श्रीनगर पुगे । त्यहाँ ‘परदेशिया' बोलको गीतको सुटिङ भइरहेको रहेछ। जीवनको टर्निङ प्वाइन्ट बनेको पहिलो काम सम्झन्छन् उनी, ‘पहिलोपटक रेखा र अमिताभलाई टाढाबाट देख्दा भगवान् पशुपतिनाथलाई भेटेजस्तो लाग्यो।'
खलनायकहरूले लखेटिरहेको अवस्थामा घोडा चढेर भागेको दृश्यमा खेल्नु थियो । रेखाको पहिरन र शृंगारमा पहिलो स्टन्ट दिए जितुले । अर्को दिन अमिताभको डुप्लिकेट गर्ने मौका पनि उनैले पाए । बाघसँग लडेको दृश्यमा अमिताभको रूपमा खेले उनी । फिल्म प्रदर्शनपछि यही दृश्यका कारण अमिताभले चर्चा पाए । जितुले पनि यही दृश्यको सुटिङपछि फर्केर हेर्नु परेन।
यही दुई सिन स्टन्ट रोलले जितुलाई काम र दाम दियो । पहिलोपटक अभिनय गरेर पैसा कमाएको अनुभव रोचक ढंगले सुनाउँछन् उनी, ‘काम गरेर फर्किएको १० दिनपछि हातमा दाम प¥यो । काम गर्नुअघि कुनै सम्झौता नभए पनि पारि श्रमिकस्वरूप हातमा आठ हजार रुपैयाँ पर्दा आफूलाई मुम्बईको धनी मान्छे महसुस गरँे ।' पैसासँगै पाएको अर्को महŒवपूर्ण सम्पत्ति थियो- स्टन्ट एसिस्टेन्टको कार्ड।
विरुको समूहमा काम पाएपछि उनको माग बढ्दै गयो । ४० वर्षको दौरानमा तीन सयभन्दा बढी बलिउड चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् । अमिताभ, धर्मेन्द्र, जितेन्द्रलगायत पछिल्ला समयका अभिनेताको पनि डुप्लिकेट भएर काम गरेका छन् उनले । ललिता, जया, हेमाजस्ता चर्चित अभिनेत्री पनि छुटेका छैनन् । भन्छन्, ‘अब कोही हिरो हिरोइन बाँकी छैनन् ।' चलचित्र ‘मेरी आवाज सुनो'ले उनलाई बलिउडमा परिचित गरायो । सम्झन्छन्, ‘यो फिल्म हिट भएपछि म पनि हिट भएँ।'
स्टन्ट साहसिक खेलजस्तै हो । दर्शकलाई जिब्रो टोक्न बाध्य पार्ने सिनको सुटिङमा जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । जोखिमले कहिलेकाहीँ दुर्घटना पनि निम्त्याउँछ ।
सन् २००४ मा ‘पक्षी'मा मनोच वाचपेयको डुप्लिकेट गरिरहेका थिए, हेलिकोप्टरबाट खसेर खुट्टा भाँचियो । अझै पनि खुट्टामा स्टिल राखेर हिँडेका छन् । ‘ए आग कब बुझेगी'मा शरीर जलेको दृश्यमा अभिनय गर्दा उनको अनुहार पूरै जल्यो । ६ दिनसम्म अस्पताल बसे । त्यसपछि श्रीमतीले काम छोडेर नेपाल फर्किन आग्रह गरिन् । खतराको खेल खेल्ने बानी लागेका जितुको मन कहाँ मान्थ्यो र ? जोखिममै इन्जोय गर्न सिकिसकेका उनी भन्छन्, ‘बलिउडमा मैले जति आगो कसैले लगाएको छैन।'
त्यसो त जोखिममात्र छैन फिल्म जीवनमा । रमाइला क्षणहरू स्मृति एल्बममा बसिदिन्छन् । चलचित्र ‘सरफरोस' त्यस्तै एउटा स्मृति हो । २० प्रतिशतभन्दा बढी काम भएर रोकिएको यो फिल्म कहिल्यै रिलिज भएन । अमिताभ र मद्रासी अभिनेत्रीको अभिनय रहेको यो चलचित्रमा जितु र उनका साथीले पालैपालो अभिनेत्रीको डुप्लिकेट गरिरहेका थिए । उनी ठ्याक्कै अभिनेत्रीजस्ता देखिएका थिए । साथीले जितु सोचेर पछाडि गएर चिमोटेछन् । तर, उनी असली अभिनेत्री परिछन् । साथीले नमज्जाको गाली खाए । बलिउडका निर्देशक मनमोहन देसारले जितुलाई नै असली अभिनेत्री सम्झेर चलचित्रको मुख्य कथा सुनाएको क्षण अहिले पनि हँसाउने विषय बनेको छ उनलाई।
‘रूपकी रानी चोरोँका राजा'मा उनले श्रीदेवीको डुप्लिकेट गरेका छन् । काम गरिसकेपछि श्रीदेवीसँग फोटो खिच्ने इच्छा व्यक्त गरेछन् । त्यति बेला श्रीदेवीले दिएको प्रतिक्रिया उनका लागि जीवनमै पाएको सबैभन्दा स्मरणीय प्रतिक्रिया हो । श्रीदेवीको प्रतिक्रिया सम्झेर उनी अहिले पनि फुरुंग हुन्छन् । श्रीदेवीले भनिछन्, ‘तपाईंले मसँग किन, मैलेचाहिँ तपाईंसँग फोटो खिच्न चाहेको।'
अभिनेत्रीहरू जितुले उनीहरूको डुप्लिकेट गरेको देख्दा दंग पर्थे रे । प्रायः अग्ला स्टन्ट एसिस्टेन्टहरू अभिनेत्रीको रोलमा फिट हुँदैनथे । जितुको उचाइ र पातलो शरीर जुनसुकै अभिनेत्रीको डुप्लिकेट बनाउन पनि फिट।
लामो समयसम्म जितुले विरुको चेला भएर काम गरे । पछि विरुकै छोरा अजय देवगनको गुरु हुने मौका पाए । अजयलाई सातआठ महिना जितुको समूहले तालिम दिएको थियो । जितेन्द्र र विरुको परिवारसँग उनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ । विरु उनलाई कति विश्वास गर्थे भने जग्गा पनि उनकै नाममा किन्थे।
स्थापित हुन गरेको संघर्षका वर्ष लामा छैनन् जितुका । मुम्बई पुगेको आठ वर्षमै घर किने उनले । अहिले मुम्बईमा सुविधासम्पन्न जीवन बिताइरहेका छन् । ३० वर्ष स्टन्ट एसिस्टेन्ट भएर काम गरेपछि १० वर्षदेखि स्टन्ट निर्देशकका रूपमा काम गरिरहेका छन् । रागिनी एमएमएस, मस्ताना, रिंकुशलगायत करिब ३० वटा हिन्दी चलचित्रमा उनले स्टन्ट निर्देशन गरेका छन् । मराठी, पन्जाबीलगायत अन्य भाषाका करिब ५० वटा चलचित्रमा पनि उनको निर्देशनको स्टन्ट छ । उनको १२ जनाको स्टन्ट समूह छ । अहिले उनी ‘बालाजी टेलिफिल्मस्', ‘बीबीसी वल्र्ड वाइड' लगायतका ठूला कम्पनीमा आबद्ध छन्।
बलिउडमा पसिना पोखे, उसले उनलाई मान दिएको छ । उनले त्यहाँ नेपालको नाम चिनाएका छन् । ‘गोर्खालीको छोरो कुनै खतरासँग डराउँदैन' भन्ने छाप छोडेको बताउँछन् उनी । श्रीमतीको स्वर्गवास भइसक्यो । छोरीको विवाह भइसक्यो । छोरा दुबईमा छन् । अझै दुईचार वर्ष बलिउडमा काम गर्ने योजना रहेको बताउँछन् । त्यसपछि नेपाल नै फर्कने सोचमा छन् उनी । भन्छन्, ‘नेपाल मेरो मुटु हो, नेपाली चलचित्रका लागि जे सक्छु, त्यो सहयोग गर्छु।'
जितुले नेपाली चलचित्रमा पनि काम गरेका छन् । करिब एक दर्जन नेपाली चलचित्रमा उनको भूमिका छ । श्रीकृष्ण श्रेष्ठको अन्तिम चलचित्र ‘कोहिनुर'मा काम गरेको सम्झन्छन् उनी।
बालुवाटारबाट 'झुल्किए' नवराज सिलवाल 37781
कालो बोको ढालेर सरकारी निवासमा मुख्यमन्त्री (फोटो फिचर) 6227